Kedu ihe bụ Sanno Sodo Memorial Hall? | Sanno Sodo Memorial Hall
Aha ndị Japan maka osisi catalpa dị n’ogige ahụ bụ American Catalpa ovata.Ọ bụ osisi metụtara Joseph Hardy Neesima, onye nkụzi ndụ Soho na onye guzobere Mahadum Doshisha.A ka echedoro ya nke oma dika osisi di uku nke na egosiputa ihunanya nke ndi isi abuo na ndi n’eso uzo ya, na kwa onwa May na June, o n’agba okooko mara mma n’udi di nma.
Akwụkwọ Tokutomi Soho nke Abbreviation
Amụrụ na Jenụwarị 1 (Maachị 25th nke kalenda ọhụụ) na Sugido Village, Kamimashiki District, Kumamoto Prefecture, n’ime obodo nne Hisako.
Ebugara ya na Tokyo ka ọ bụrụ onye na-ede akụkọ akụkọ.Banyere Tokyo English School (nke bụbu ụlọ akwụkwọ sekọndrị mbụ) wee mesịa kwaga na Doshisha English School.
Machị 3 Oe Gijuku ga-emepe.
Nabata Oriakụ Shizuko.
E bipụtara "Ọdịnihu Japan".Oe Gijuku mechiri ma ezinụlọ ahụ kwagara Tokyo.
Guzosie ike Minyusha ma bipụtara "Ndị Enyi Mba".A na-akpọ ya Soho.
Mbido mbụ nke "Kokumin Shinbun", onye isi na onye isi nchịkwa.
Nleta Tolstoy, ya na Eigo Fukai na-eme njem na Europe.
Họpụtara dika onye otu n’ime oflọ ndị nwenụ.
Soro na mpịakọta nke mbụ nke akụkọ ntolite nke mba Japan n'oge oge mbụ.
Emechara Sanno Kusado.Ezinụlọ na-akwaga ebe a.
Onye otu ulo akwukwo Imperial Academy.
Hapụ ụlọ ọrụ Kokumin Shinbun.Ghọrọ onye ọbịa nke Daigo Tohnichi (Mainichi Shimbun).
Bụrụ onye otu n’ime Academylọ Akwụkwọ Imperial Academy of Arts.
Natara Iwu nke Omenala wee kwaga Atami Izusan Yoseidou.
Mgbe agha ahụ biri, ọ jụrụ ọfịs na nsọpụrụ niile ọ na-arụ.
Emechara ederede nke 100 nke mpịakọta nke akụkọ ihe mere eme nke mba.
Bụrụ nwa amaala ugwu nke Minamata City na nwa amaala asọpụrụ nke Kumamoto City.
Ọ nwụrụ na November 11nd na Atami Izusan Yoseidou.